Ọkachamara Semalt - Gịnị Bụ Nchapu Web?
Nchịkọta data (ma ọ bụ ntanetị weebụ) bụ usoro nke kọmputa gị usoro ma ọ bụ ngwaọrụ ga-ewepụ data bara uru site na blọọgụ gị ma ọ bụ saịtị ya nke mere na enwere ike iji ya na-anọghị n'ịntanetị, maka nzube ndị ọzọ. Nye ndị dị iche iche, iwepụ na-ada ụda na-emenye egwu kama ngwá ọrụ nchapu na-eme ọtụtụ saịtị dị kwa ụbọchị ma nwee ike inyere gị aka weghara data bara uru site na ibe weebụ ọbụghị. Ọ ga-ewe nanị sekọnd ole na ole iji kpochapụ ihe nchọgharị weebụ iji chọpụta, mata, na hazie ibe weebụ wee jikwa nnukwu ọdụ data. Mana enwere ụfọdụ ụzọ ụfọdụ iji jide n'aka na ị na-eji ihe nchọgharị weebụ gị na-eme ihe kacha mma. Site na ụzọ ndị a, ị nwere ike ịmekọrịta ibe weebụ, ederede, ihe oyiyi, eserese, vidiyo, memes na infographics na-enweghị nsogbu ma nwee ike ịchekwa ihe niile ahụ na kọmputa gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Nyocha Ịchọ Nchọpụta (SEO):
Ụzọ na-abịa na saịtị ma ọ bụ blog nwere ike ịpụta site na ọtụtụ ọnụọgụ, , okporo ụzọ a na-akwụ ụgwọ, usoro mgbasa ozi, ozi ntanetị, na ozi ịntanetị. Ọ dị mkpa iji melite arụmọrụ nke saịtị gị na SEO ma belata ụba ọnụ ya ruo n'ókè. Mgbe ị kpochapụrụ saịtị gị na ngwá ọrụ ntanetị weebụ, ị ga-enwe ike ịlele ma ọ bụ gaa site na faịlụ ndị bara uru maka azụmahịa gị n'ịntanetị..N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike ịhazi ihe dị mkpa n'otu ebe na ihe na-adịghị mkpa n'ebe ọzọ. Ọzọkwa, ọ ga-enyere aka melite nyochacha njirimara nke saịtị gị dị ka ọdịnaya ya ga-aba uru na ọtụtụ ntinye okwu bara uru.
Ndị ọchụnta ego niile maara na nchọpụta ahịa bụ otu akụkụ nke mmeri ha. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịmalite, gbanwee ma ọ bụ gbasaa azụmahịa gị, ị ghaghị ịme nchọpụta ahịa kwesịrị ekwesị banyere ihe kachasị mma weebụ, ma jide n'aka na ị nwere ike ịhazi ma ihe bara uru na nke na-enweghị uru dịka ihe ndị ọkachamara gị chọrọ si dị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị nwere ike ịsị na enwere mmekọrịta siri ike n'etiti nchọpụta ahịa na ngwá ọrụ weebụ ntanetị dị irè ka ha abụọ ga-arụkọ ọrụ ọnụ n'akụkụ maka azụmahịa gị.
Dịka nchọpụta ahịa, ịmepụta ndị dị mkpa dị mkpa ịzụlite azụmahịa na ịntanetị. Dabere na ika gị, ndị na-eduga nwere ike ịnweta data bara uru na nkọwa kọntaktị nke ndị ahịa nwere ike. Ngwakọta ihe nchọgharị weebụ dị iche iche nwere ike inyere gị aka ịhazi ọdịnaya gị ma chọpụta ụdị ụdị nke ndu ga-eme maka azụmahịa na-eme nke ọma ma na-arụpụta na ịntanetị.
Nyocha na mmetụta:
I kwesịrị ịchọrọ ịchọta si Yelp, TripAdvisor, Zomato, Google, Trustpilot, Amazon, Business Business Bureau na nyocha ndị ọzọ. saịtị iji mata ma ndị ahịa gị hà na-eju afọ na ngwaahịa na ọrụ gị ma ọ bụ. Maka nke a, ị ga-agbanye na saịtị mgbasa ozi mmekọrịta ma chọọ ụdị na ngwaahịa site na aha iji nwee echiche nke ụdị data ha weghaara na ịntanetị. Nkọwa ndị kwekọrọ na ya na profaịlụ profaịlụ ga-enye gị nghọta maka otu esi aga n'ihu na azụmahịa gị. Ọ ga-enye gị nkọwa gbasara adịghị ike nke onye asọmpi na ike gị ka i wee nwee ike ime ihe kwekọrọ na ya Source .